कान्छी मेरो कमब्याक फिल्म होः श्वेता खड्का « News of Nepal
कान्छी मेरो कमब्याक फिल्म होः श्वेता खड्का
कहाँ भेटिएला नामक फिल्मबाट रजतपटमा डेब्यु गरेकी नायिका श्वेता खड्का कोहिनुरबाट फिल्म निर्मात्रीका रूपमा पनि देखिइन्। नायक स्व. श्रीकृष्ण श्रेष्ठकी नायिका पत्नी स्वेता खड्का फिल्म कान्छीमार्फत् केही वर्षको अन्तरालपछि नेपाली फिल्मी क्षेत्रमा पुनः फर्केकी छिन्। नायक पति श्रीकृष्णको मार्ग पछ्याउँदै सामाजिक कार्यमा पनि सक्रिय श्वेताले सोमबार आफ्नो श्वेताश्री फाउन्डेसामार्फत् सिन्धुपाल्चोकको चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिका १४ स्थित एकीकृत माझीबस्ती निर्माण शुरू गरेकी छिन्। फिल्म निर्माण र बस्ती निर्माणसम्बन्धी उनीसँग गरिएको कुराकानी यहाँ प्रस्तुत छः
कान्छीको निर्माण कार्य कहाँ पुग्यो ?
सबै तयारी भइसक्यो। फिल्म अब एक⁄दुई हप्तामा नै फिल्डमा जाँदै छ। हामी अहिले पनि फिल्मलाई सुटिङ फ्लोरमा लाने तयारी गर्दै छौं। अब केही तयारी बाँकी छन्। त्यसपछि कान्छीको निर्माणकार्य शुरू हुनेछ।
लामो समयपछि फिल्म निर्माण गर्न लाग्नुभएको छ, कस्तो लागिरहेको छ ?
पहिले पनि फिल्म कोहिनुरको निर्माण गरेको हो। लामो समयपछि फिल्म निर्माणमा आउँदा फरक अनुभव त हुन्छ नै। त्यो बेला उहाँ (श्रीकृष्ण) ले सबै व्यवस्थापन सम्हाल्नुहुन्थ्यो, मैले एक्टिङ मात्र गरेको थिएँ। त्यो बेला म आफ्नै बिजनेसमा ध्यान दिइरहेको थिएँ, तर अहिले फिल्म निर्माणको सबै तयारी आफैं गरिरहेको छु। फिल्मको कुरालाई लिएर केही नर्भस र एक्साइटेड पनि छु। पहिलेको भन्दा बढी जिम्मेवारी बढेको महसुस भइरहेको छ।
अहिले फिल्म निर्माणको शैली फेरिएको छ, कान्छीलाई फेरिएको शैलीमा बनाउन के गर्दै हुनुहुन्छ ?
यो फिल्म पहिलेको ट्रेन्डमा बन्दैन। फिल्ममा दर्शकले फरकपन महसुस गर्नुहुनेछ। कान्छी सोसल लभ स्टोरीमा आधारित फिल्म भएकाले यसका कलाकारहरू पनि त्यहीअनुसार फाइनल भएको छ। फिल्म रियालिटी बेस्डमा बन्नेछ।
फिल्म निर्माण कार्य आर्थिक फाइदा लागि गर्दै हुनुहुन्छ या अरू नै केही उद्देश्यले ?
आर्थिक फाइदाकै लागि भनेर फिल्म निर्माणमा गर्न लागेको त होइन। यो मेरो निर्माणको दोस्रो फिल्म हो। यस फिल्मलाई मैले फिल्म उद्योगमा आफ्नो कम ब्याकको रूपमा लिएको छु। मलाई दर्शकले जुन माया दिनुभयो, त्यसका लागि पनि मैले फिल्म निर्माण गर्न लागेको हो। सकेसम्म काम राम्रै गरेर हन्ड्रेड पर्सेन्ट रिजल्ट दिन खोजेको छु। फिल्म पनि एक उद्योग भएकाले यसमा धेरै नै पैसा इन्भेस्ट हुन्छ। काम राम्रो भयो भने फिल्मले आफैं सफलता पाउँछ। म काम गर्छु तर फलको आशा राख्दिनँ। बाँकी काम दर्शकको हो।
फिल्म निर्माण र सिन्धुपालचोकको माझीगाउँमा एकीकृत बस्ती निर्माणको कार्य एकसाथ कसरी अगाडि बढाउँदै हुनुहुन्छ।
मैले फिल्म निर्माण र माझीबस्तीको निर्माणको घोषणा एकैपटक गरेको होइन। फिल्म निर्माणको घोषणा ७⁄८ महिनाअघि नै गरेको थिएँ। तर, माझीबस्ती निर्माणको घोषणा फिल्ड भिजिटको क्रममा ३ महिनाअघि मात्र गरेको हो। लाइफको जर्नीमा कुन बेला के हुन्छ भन्नै सकिन्न संयोगवश दुवै काम लगभग एकै समयमा शुरु हुन लागेको छ। यी दुवै कामलाई सयम म्यानेज गर्दै एकैपटक लानेछु। सायद बस्ती निर्माण र फिल्म एकैपटक निर्माण हुनेछ।